Mpanamboatra sy mpamatsy haingana HCV Rapid Test Cassette / Strip / kit (WB / S / P) | Hẻo
Kasety / Strip / kit (WB / S / P) HCV fitsapana haingana
Ny HCV Rapid Test Cassette / Strip dia immunoassay chromatographic mikoriana eo an-dàlam-pandrefesana ho an'ny fitiliana kalitao ny antibiotika amin'ny Virosy Hepatitis C amin'ny ra / serum / plasma manontolo. Manome fanampiana amin'ny famaritana ny aretina amin'ny Hepatitis C Virus.
Ny virus Hepatitis C (HCV) dia viriosy RNA tokana voafandrika ao amin'ny fianakaviana Flaviviridae ary mpiorina amin'ny Hepatitis C. Hepatitis C dia aretina mitaiza olona 130-170 tapitrisa manerantany. Raha ny filazan'ny OMS, isan-taona dia olona maherin'ny 350.000 no matin'ny aretin'ny atin'ny hepatite C ary olona 3-4 tapitrisa no voan'ny HCV. Manodidina ny 3% ny mponina eran-tany no tombanana ho voan'ny HCV. Maherin'ny 80% ny olona voan'ny HCV dia voan'ny aretin-tratra mitohy amin'ny atiny, 20-30% dia voan'ny cirrhosis aorian'ny 20-30 yr, ary 1-4% no matin'ny cirrhosis na homamiadan'ny atiny. Ireo olona voan'ny HCV dia mamokatra antibody amin'ny viriosy ary ny fisian'ireto antibody ireto ao amin'ny ra dia manondro ny aretina ankehitriny na taloha tamin'ny HCV.
[Fifehezan] (25sets / 40sets / 50sets / namboarina manokana dia nekena avokoa)
Ny cassette / cette de test dia misy tady membrane mifono antigène HCV mitambatra amin'ny tsipika fitsapana, antibody bitro eo amin'ny tsipika fifehezana, ary dite pad izay misy volamena koloidaly miaraka amin'ny antigen HCV namboarina. Ny habetsahan'ny andrana dia natao pirinty tamin'ny fanoratana.
Kasety fitsapana / tsipika
Fitaovana ilaina fa tsy omena
Kaontenera fanangonana santionany
Ny fomba mahazatra dia tsy mahavita mitoka-monina ny viriosy amin'ny kolontsain'ny sela na mijery azy amin'ny alàlan'ny mikroskopan'ny elektronika. Ny fananganana ny genome virus dia nahafahana namorona fitsapana serolojika mampiasa antigen recombinant. Raha ampitahaina amin'ny taranaka voalohany HCV EIA mampiasa antigen recombinant tokana, antigène marobe mampiasa proteinina recombinant sy / na peptides synthetic no nampiana amin'ny fitsapana serologika vaovao mba hisorohana ny reactivity tsy mitombina ary hampitombo ny fahatsapana ny fitsapana antibody HCV. Ny HCV Rapid Test Cassette / Strip dia mahatsikaritra ny anti-bakteria amin'ny aretin'ny HCV ao amin'ny Rà manontolo / Serum / Plasma. Ny fitsapana dia mampiasa fitambaran-tsiranoka proteinina A mifangaro sy proteinina HCV recombinant mba hahitana tsara ny antibodies amin'ny HCV. Ny proteinina HCV miverimberina ampiasaina amin'ny fitsapana dia voahodidin'ny fototarazo ho an'ny proteinina struktural (nucleocapsid) sy tsy rafitra.
Ny HCV Rapid Test Cassette / Strip dia immunoassay mifototra amin'ny fitsipiky ny teknikan'ny antigen-sandwich roa heny. Mandritra ny fanandramana dia misy santionany amin'ny Rà / Serum / Plasma iray manontolo mifindra miakatra amin'ny alàlan'ny hetsika capillary. Ny antibodies mankany amin'ny HCV raha misy ao anatin'ilay santionany dia hifamatotra amin'ireo mpampifandray HCV. Ny hery fiarovan'ny hery fiarovana dia avy eo voasambotra tamin'ny antigène HCV efa nopetahana takelaka, ary misy tsipika miloko hita maso ao amin'ny faritra misy ny fizahana maneho vokatra tsara. Raha tsy misy ny antibodies amin'ny HCV na misy eo ambanin'ny haavon'ny tsikaritra, dia tsy hisy tsipika miloko ao amin'ny faritra misy ny fizahana maneho vokatra ratsy.
Mba hanaraha-maso ny fomba fiasa, dia misy tsipika miloko hiseho foana eo amin'ny faritry ny tsipika fifehezana, izay manondro fa nampiana ny habetsaky ny santionany ary nisy ny famonoana ny membrane.
(Ny sary dia natao hiresaka fotsiny, azafady mba jereo ny zavatra ara-nofo.) [Ho an'ny Kasety]
Esory ny kasety fanandramana ao anaty paosy voaisy tombo-kase.
Ho an'ny santionana sérum na plasma: Tazony mitsivalana ilay dropper ary afindra serum na plasma 3 (sahabo ho 100μl) mankany amin'ny lava santionany (S) amin'ny fitaovana fanandramana, avy eo atombohy ny timer. Jereo eto ambany ny sary.
Ho an'ny santionan'ny rà iray manontolo: tazomy mitsivalana ilay rano mitete ary afindra 1 latsaka ny rà iray manontolo (35μl eo ho eo) amin'ny fantsom-pahalalana (S) an'ilay fitaovana fanandramana, avy eo ampio buffer 2 (mitete 70μl eo ho eo) ary atombohy ny timer. Jereo eto ambany ny sary.
Miandrasa hiseho ny tsipika miloko. Adikao ny valin'ny fitsapana ao anatin'ny 15 minitra. Aza mamaky valiny aorian'ny 20 minitra.
[Fampitandremana sy fitandremana]
Ho an'ny diagnostika in vitro ihany.
Ho an'ireo matihanina amin'ny fahasalamana sy ireo matihanina amin'ny toeram-pitsaboana.
Aza ampiasaina aorian'ny daty lany daty.
Azafady mba vakio ny fampahalalana rehetra amin'ity takelaka ity alohan'ny hanaovana ny fitsapana.
Ny cassette test / strip dia tokony hijanona ao anaty paosy mihidy mandra-pampiasa azy.
Ny santionany rehetra dia tokony horaisina ho mampidi-doza ary ampiasaina amin'ny fomba mitovy amin'ny mpitsabo areti-mifindra.
Ny cassette / strip fanaovana andrana dia tokony ariana araka ny lalàna federaly, fanjakana ary eo an-toerana.
Ny fifehezana ny fomba fiasa dia tafiditra ao amin'ilay fitsapana. Ny tsipika miloko miseho ao amin'ny faritra fanaraha-maso (C) dia raisina ho toy ny fifehezana ny fomba anatiny. Manamafy ny habetsaky ny santionany izy io, ny famonoana ny membrane ary ny teknikan'ny fomba fiasa marina.
Ny fenitra mifehy dia tsy omena miaraka amin'ity kitapo ity. Na izany aza, tolo-kevitra ny hifehezana ny fanaraha-maso tsara sy miiba ho laboratoara tsara hanamafisana ny fomba fizahana sy hanamarinana ny fahombiazan'ny fitsapana.
Ny HCV Rapid Test Cassette / Strip dia voafetra hanome famantarana kalitao. Ny hamafin'ny tsipika fitsapana dia tsy voatery hifanaraka amin'ny fifantohan'ny antibody ao anaty ra.
Ny valiny azo tamin'ity fitsapana ity dia natao ho fanampiana amin'ny famaritana ihany. Ny dokotera tsirairay dia tsy maintsy mandika ny valiny miaraka amin'ny tantaran'ny marary, ny fikarohana ara-batana ary ny fomba fitsaboana hafa.
Ny valin'ny fitsapana ratsy dia manondro fa ny antibodies ho an'ny HCV dia tsy eo na amin'ny ambaratonga tsy takatry ny fitsapana.
Fifanarahana amin'ny test HCV Rapid Commercial
Ny fampitahana mifanila dia natao tamin'ny alàlan'ny HCV Rapid Test sy fitsapana haingana HCV azo vidy. Ny santionan'ny klinika 1035 avy amin'ny hopitaly telo dia nohamarinina tamin'ny HCV Rapid Test sy ny kitapo ara-barotra. Ireo santionany \_ dia nozahana tamin'ny RIBA hanamafisana ny fisian'ny antibody HCV ao anatin'ireo specimens. Ireto valiny manaraka ireto dia voatanisa avy amin'ireo fandalinana klinika ireo:
Fitsapana haingana HCV ara-barotra sokajy
HEO TECH® tsara 314 0 314
ratsy 0 721 721
sokajy 314 721 1035
Ny fifanarahana eo amin'ireo fitaovana roa ireo dia 100% ho an'ny santionany tsara, ary 100% ho an'ny karazan-tsakafo ratsy. Nasehon'ity fanadihadiana ity fa ny HCV Rapid Test dia mitovy amin'ny fitaovana ara-barotra.
Fifanarahana amin'ny RIBA
Ny santionany amin'ny klinika 300 dia nohamarinina tamin'ny HCV Rapid Test sy ny kit HCV RIBA. Ireto valiny manaraka ireto dia voatanisa avy amin'ireo fandalinana klinika ireo:
sokajy 100 200 300
Previous: COVID-19 IgG / IgM Cassette Test Rapid (volamena koloidaly)
Manaraka: Fitsapana HCV tokana (Rà / Serum / Plasma)
fitsapana antibody anti hcv
fitsapana ra anti hcv
fitsapana ra hcv
fitsapana genotype hcv
hcv tsy mihetsika
Fitaovana fitsapana haingana HCV
fitsapana hcv rna
Influenza A + B Cassette Fitsapana haingana
Fitsapana HCV tokana (Rà / Serum / Plasma)
Fitaovana fitsapana Dengue IgGIgM (BloodSerumPlasma manontolo)
Fitaovana fitsapana dengue Ns1 (BloodSerumPlasma manontolo)